वि.सं. १९९८ फाल्गुण १६ गते खाँदबारी सङ्खुवासभामा बुबा पं. भीमप्रसाद शर्मा कट्टेल एवम् लीला देवीको कोखबाट जन्मनु भएका सोम राज शर्मा कट्टेलले विद्या आर्जनको क्रममा शास्त्री (संस्कृत) एम.ए. नेपाली गर्नु भएको छ। साहित्य तर्फको प्रवेशको क्रमसँगै महाकवि सोम राज अभयको...
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ६, २०७९
खोटाङ । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत खोटाङका दुई स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला विजयी भएका छन् । चार स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार उठाइएकामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको मेयरमा बिमला राई र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अरुणादेबी राई विजयी भएका हुन् । जिल्लाका स्थानीय तहले...
हुम्ला । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार प्यारीलाल शाही विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमकला शाही विजयी भएकी छन्। अध्यक्ष स्वतन्त्रबाट उठेका शाहीले १ हजार ५ सय २३ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका...
सर्लाही । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका रमेश बुडाथोकी र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी हरिमाया घलान विजयी भएकी छिन् । हरिवन नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार मेयरमा माओवादी केन्द्रका बुडाथोकीले एमालेका गणेशप्रसाद प्रसाईलाई १५३ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । २०७४ सालको...
सुनसरीको बर्जुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै एमाले विजयी
सुनसरी । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)विजयी भएको छ । अध्यक्ष पदमा एमालेका जिवछकुमार राय सात हजार ८६१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रघुनन्दन चौधरीले सात हजार ४७४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।...
आज नेपाल भर नै वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ ।आज दिउँसो मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा हुने भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । हाल नेपालमा स्थानीय वायु, भारतको उत्तर प्रदेश आसपास...
काठमाडौं । अछामको साँफेबगरमा आज शुक्रबार मतदान हुने भएको छ । यसअघि ३० वैशाखमा स्थगित भएको मतदान आज बिहानदेखि हुन लागेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ र बाजुरा जिल्ला बुढीगंगा...
राजविराज नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा जसपा विजयी
सप्तरी । राजविराज नगरपालिका मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका भीमराज यादव निर्वाचित भएका छन् । यादव ९ हजार ५४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका शम्भु यादवले ४ हजार ७ सय १८ मत प्राप्त गरे । उपमेयरमा...
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको मेयरमा राप्रपाका अजय थापा
कपिलवस्तु ।कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको मेयरमा राप्रपाले जित हात पारेको छ । उक्त नगरपालिकामा राप्रपा उम्मेदवार अजय थापा ७ हजार ६०२ मत सहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका महादेव पोख्रेल ७ हजार १२८ मत ल्याउँदै पराजित भए ।
सप्तरीको खडक नगरपालिका मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा जसपा
सप्तरी ।सप्तरीको खडक नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जयप्रकाश चौधरी थारु निर्वाचित भएका छन् । उनी ५ हजार ८ सय ८२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जसपाका उम्मेदवार एवं निवर्तमान मेयर हेमायु हकले ५...
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ५, २०७९
काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा प्रवर्द्धनलागि लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयसँग साझेदारी गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत नबिल बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई वित्तिय सल्लाहकार सेवा प्रदान गर्न, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र नेपालमा...
काठमाडौँ ।प्रभु बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रा.लि.का बिच सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रा.लि. मा आकर्षक छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री मनिराम पोखरेल र सिद्धार्थ...
काठमाडौँ । प्रसिद्ध साहित्यकार तथा साहित्यिक पत्रकार नारायणप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित चर्चित साहित्यिक पत्रिका प्रगतिका प्रकाशित सम्पूर्णअङ्कहरू बाँस्कोटाका साहिँला सुपुत्र प्रा.डा. कमल बाँस्कोटाले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । बुधबार प्रज्ञा भवनको देवकोटा सभा कक्षमा आयोजित समारोहमा प्रा.डा. बाँस्कोटाले...
सप्तरीको शम्भुनाथ: मेयर उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीका जितेन्द्र र अनिता विजयी
सप्तरी ।शम्भुनाथ नगरपालिका मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकाजितेन्द्र प्रसाद गुप्ता कलवारनिर्वाचित भएका छन्। उनले५ हजार ३९२ मत प्राप्त गरी नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका कांग्रेसका दिपेन्द्रकुमार चौधरीले ४ हजार १४३ मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा...
रसुवाको चुनावी परिणाम : कांग्रेस तीन, एमाले दुई
रसुवा । रसुवाका पाँँच पालिकामध्ये तीनमा कांग्रेस र दुई पालिकामा एमाले निर्वाचित भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँँच पालिकामध्ये कालिका गाउँपालिका, नौकुण्ड गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका र गोसाइँकुण्डमा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित...
काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् । बुधबारबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा सहभागी भइरहेको छ । मंगलबार...
गणतन्त्र दिवस: १४, १५ र १६ जेठमा तीन दिन मनाइने
काठमाडौं ।सरकारले यस पटक तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । यही १४, १५ र १६ जेठमा सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको गणतन्त्र दिवस २०७९ मुल समारोह...
घोडाघोडीको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी रावत र उपप्रमुखमा एमालेकी चौधरी निर्वाचित
कैलाली ।कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का खड्क रावत निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले नेकपा (एमाले)का ममता प्रसाद चौधरीलाई पराजित गर्दै नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।रावतले १३ हजार १२८ मत ल्याएर विजयी हुँदा उहाँका प्रतिद्वन्द्वी चौधरीले आठ हजार २४१...